Iibinta Apple Watch ayaa kor u kacday rubucii lasoo dhaafay | Waxaan ka socdaa mac
Tan iyo markii ay Apple Watch suuqa ku dhufatay 2015, waxay noqotay halbeeg lagu raaco, in kastoo ma ahan kii ugu horreeyay ee ku dhaca suuqa, sharaf ku dhacda Pebble-kii gaboobay, shirkad la qabsan kari weyday suuqa shaashadda midabka taas oo aakhirkii iibsatay shirkadda Fitbit oo ah shirkad ay Google heshay sanadkii hore.
Laga soo bilaabo 2015, Apple waxay suuqa ka soo saartay Apple Watch cusub waxaanan hadda ku jirnaa taxanaha 6, oo ah mid ka mid ah smartwatches ugu fiican suuqa, ugu yaraan iOS, tan iyo Samsung Galaxy Watch 3, wuxuu na siiyaa isla shaqooyinka oksijiinta dhiiga iyo ECG nidaamka deegaanka ee Android.
Haddii aan ka hadalno iibinta Apple Watch, waa inaan ka hadalnaa, nasiib darro, qiyaaso, maaddaama Apple waligeed si rasmi ah ugu dhawaaqin iibka qalabkan uu haysto. Sida laga soo xigtay shirkadda IDC (via MacRumors), inta lagu gudajiro rubucii lasoo dhaafay, oo u dhiganta Luulyo ilaa Sebtember, Apple waxay soo dirtay 11.8 milyan Apple Watch, taas oo ka dhigan koror 75% ah marka loo eego isla muddadaas sanadkii ka horreeyay, halkaasoo rarku uu ahaa 6.8 milyan.
Qeyb weyn oo ka mid ah kororka iibka ayaa laga helaa Qiimaha Apple Watch Taxanaha 3, Moodel noqday aaladda gelitaanka ee noocyadan in ka badan 200 euro.
Kuwani 11.8 milyan unugyo u malaynayaan a rRikoor iibka seddexdii biloodba mar ee Apple Watch, tan iyo sida laga soo xigtay shirkadda Statista, Apple waligeed kama badnayn 0 milyan oo moodel ah oo la geeyay rubuc kale.
Saamiga Apple Watch ee suuqa sida ku cad IDC waa 21.6% Dunida oo dhan, kaalinta labaad kadib Xiaomi, oo saamigeeda suuqa uu taagan yahay 24,5%, aaladdeeda ugu iibinta badan waa Mi Band 5, oo ah jijin qiimayn ah oo qiimaheedu yahay 30 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Iibinta Apple Watch ayaa kor u kacday rubucii hore
Mexico waxay diyaarisay imaatinka Apple Pay